Android လုလင်: July 2013
How To Root Your Google Nexus Phone
သင့်မှာ Goolge-Nexus4ဖုန်းရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Root မလုပ်ကြည့် ချင်ဘူးလား။ Root လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် CNET ကရေးပေးထားတာ လေးကို ပြန်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
သင့်မှာ Goolge Nexus4ဖုန်းရှိနေ တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ Root မလုပ်ကြည့် ချင်ဘူးလား။ Root လုပ်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ Setting မျိုးစုံကို ကလိချင်တိုင်း ကလိလို့ ရမယ်။ အသုံးဝင်ပြီး စွမ်းအား ပြည့်တဲ့ application တွေနဲ့ custom ROMs တွေသွင်းလို့ ရမယ်။ နောက်ပြီး သင့်ဖုန်းရဲ့  အလုပ်လုပ် ပုံတွေကိုလဲ ထိထိရောက်ရောက် ပြင်ဆင်ခွင့် ရသွား ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုးကျိုး အနေနဲ့ ကတော့ သင့်ဖုန်းရဲ့ warranty ကိုတော့ ပျက်သွားစေ နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာ မဆို အဆိုးနဲ့ အကောင်း ကတော့ ဒွန်တွဲ နေမြဲပါ။ Root လုပ်ကို လုပ်ရမယ်လို့ မဆိုလို ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကသာ အရေးကြီးဆုံးပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်း စလိုက်ကြ ရအောင်ဗျာ။
How To Speed Up Your Galaxy S3 In Two Minutes
စာဖတ်သူက Samsung Galaxy S3 ကိုင်နေတဲ့ သူထဲက တစ်ယောက်ဆိုရင် ကိုယ့်လက်ထဲမှာ S3 ရှိတာ နည်းနည်းကြာ ရောပေါ့။ ကဲ Tweak လေးတစ်ခုနဲ့ S3 ကိုနည်းနည်း ပိုမြန်အောင် လုပ်ကြ ရအောင်။
Android နည်းပညာက တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တိုးတက်လာလေ HTC One နောက်ပြီး S3 နေရာကို ၀င်ယူသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ S4 တို့နဲ့ ယှဉ်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ S3 ကိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက် အတွက် နည်းနည်းများ နှေးနေ မလားလို့ ခံစားကောင်း ခံစားရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း တွေထဲမှာ နောက်ဆုံး ထွက်တာနဲ့ ပစ္စည်းကောင်းကောင်း ကိုပဲ ရွေးကိုင်တဲ့ သူတွေဆီက အသစ်ထွက်တဲ့ ဖုန်းတွေကို ကိုင်ပြီး ကိုယ့် S3 နဲ့ယှဉ်ရင် နှေးတယ်၊ တစ်ချို့နေရာ တွေမှာ မြန်သင့် သလောက် မမြန်၊ ချောသင့်သလောက် မချောဘူး ဖြစ်နေတယ်လို့ ရံဖန်ရံခါ ခံစားရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် S3 ကို နည်းနည်းလေး ကြိုးစားပြီး Speed တင်ဖို့ နည်းလေး တစ်ခု တွေ့ထားပါတယ်။
Remove Bloatware from Galaxy S3
ဖုန်းတွေထဲမှာ manufacturer တွေထည့်ပေး သမျှ app တွေထဲမှာ ကိုယ့်အတွက် တကယ် အသုံး မ၀င်တဲ့ bloatware တွေအများကြီးပါ။ ဒါတွေကို ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ။
Android မှာ app နဲ့ tool တွေက ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုး အတွက် မရှိဘူး ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ Google platform ကြောင့်လို့တော့ မပာုတ်ပါဘူး။ Apple ရဲ့ iOS လည်းတူတူပါပဲ။ အဲဒါ အတွက်ဒီ app ရှိတယ်လေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောစရာ တစ်ခုက Android မှာ iOS ကနေ အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးတဲ့ app တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရမလား။ Keyboard ပဲကြည့် ရအောင်။ Android မှာများပြား လှတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ iOS မှာတော့သင် jailbrake မလုပ်ရင် ပြုပြင်လို့ မရပါဘူး။ messaging app မှာအစားထိုး စရာ နောက်တစ်မျိုး ဆိုရင်ရော? Go SMS Pro ပာာ Android အသုံးပြုသူ တွေကြားမှာ ခေတ်စား နေတာ အတော် ကြာနေပါပြီ။ ပြီးတော့ Sony တို့ HTC တို့လို ထုတ်လုပ်သူ တွေမှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် လှလှပပနဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ messaging app တွေရှိပါသေးတယ်။ သင်ဒါမျိုးကို iOS မှာ မရသလို နောင်လဲ ရနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
Remotely Power off Androids
Android ဖုန်းတွေအတွက် အဝေးကနေ message ပို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ smartphone ဖုန်းကို လှမ်းပိတ် လို့ရနိုင်မယ့် Remote Turn Off app ကိုစမ်းကြည့် ကြပါဦး။
အဝေးကနေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတာဟာ နေ့စဉ်နဲ့ အလုပ်လုပ် နေတဲ့သူတွေ အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်တဲ့အရာ တစ်ခုပါ။ remote desktop apps တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း တွေက အများကြီး ရှိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ မှာတော့ အခြေခံ အကျဆုံး လုပ်ဆောင်ချက် တွေကိုလည်း မေ့မထား သင့်ပါဘူး။
Disable Android Passwords When Close to Wifi
Android ဖုန်းတွေမှာ ကိုယ်နဲ့ Recognized ဖြစ်ပြီးသား Bluetooth/ Wi-Fi Devices တွေနား ရောက်သွားရင် Password ကိုအလိုလျောက် Disable လုပ်ပေးမယ့် app တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပါမယ်။
ကိုယ့် device password ကို recognized ဖြစ်နေတဲ့ အခြား device တွေမှာကိုယ့် device ရဲ့ Bluetooth/Wi-fi အစရှိတာ တွေကို ပိတ်တဲ့ အခါတွေမှာ android password တွေကို အလိုအလျောက် disable ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ့် Bluetooth and Wifi Unlocker ကို download လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Android Phone အတွက် အဆင်ပြေ ဖလမ်းဖလမ်းထလို့ ရတဲ့ဆော့ဝဲ
အကြောင်းတခုခုကြောင့် ကိုယ်က အပြင်သွား နေရချိန် ဖုန်းနဲ့ ကို ယ်နဲ့ ဝေးနေချိန်တွေ မျိုးမှာ..ကိုယ့် ဖုန်းကို သူများ က ယူဆက် မှာ စိုးရိမ်ရင် ဒီ Application လေးသာ ထည့်ထားလိုက်ပါ။သူ က ဖုန်း ကို အထွက်ခေါ်လို့မရအောင်လုပ်ပေးမယ့် Application ပါ။
ဖုန်းရဲ့ ငွေဖြည့်ကဒ်ကို hack ခြင်းအကြောင်းကို ကိုမင်းစိုးရာဇာ ရဲ့ ဆိုက်ကနေ တွေ့ရှိလို့ ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါ
တယ်။ ကိုမင်းစိုးရာဇာ ပြောထားတာကတော့ "မသိသူ ကျော်သွား၊ သိသူ ဖော်စား ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ နည်းကိုတော့ Complete ပြောပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ MPT မှာ Error တွေ ရှိတယ်၊ ဒီ Error တွေကို ကိုယ့်ဉာဏ်စွမ်းရှိသလို ထိုးစွနိုင်ရင် ရနိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ ကံဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကံကို ယုံပြီး ဆူးပုံနင်းရင်တော့ ခွေးဖြစ်မှာပါပဲ၊ ကံဆိုတာ အလုပ်ပါ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ကံကောင်းအောင် တစ်
နေ့ကို ၁၅နာရီ အလုပ်လုပ်ပါတယ်" <<< ဒီလို ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုမင်းစိုးရာဇာ တင်ထားတဲ့
မူရင်းပို့စ်နဲ့ Ebook ကို ကြည့်ချင်၊ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ >>>ဒီလင့်ခ်<<< ကိုသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ ဒီ
နည်းနဲ့ အဆင်ပြေကြသလား၊ အဆင်မပြေကြဘူးလားဆိုတာကိုလည်း အဲ့ဒိ ပို့စ်အောက်က Comment
တွေကို လေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဖုန်းကိုယ် စမ်းသပ်ရင်းနဲ့ Screen Shot ရိုက်ပြီး
ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ဗျ။ ကိုမင်းစိုးရာဇာလည်း ကျွန်တော်ဒီလို ဝေမျှတာကို နားလည်မှာပါလို့
*124# ဆိုရင် GSM ဖုန်းတွေ ငွေစစ်တဲ့ ကုဒ်မှန်း အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဒါကို *123# နဲ့ ခေါ်ပြီး စမ်းကြည့်
ကြရအောင်။ ပထမဆုံး ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာမှာ *123# လို့ ရိုက်ပြီး ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။
အောက်ပါအတိုင်း Please Input your Voucher Number. လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM9comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ ဖုန်းကတ် hacking
TV မှ မြ၀တီလိုင်းကို android ဖုန်းပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်း ၂
ပထမဆုံး vplayer လေးကို မိမိ android ဖုန်းထဲသို့ install လုပ်လိုက်ပါ
vplayer download link
ပထမဆုံး အင်တာနက် ဖွင့်ပါ ။ပြီးရင် vplayer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..........
ပြီးလျှင် stream ကို ရွေးပေးပါ......
Flash Gordon v1.2 for Android (Flash Zips WITHOUTaRecovery)
Android ဖုန်းကလိနေကျသူတွေကြိုက်နှစ်သက်မယ့် application တစ်ခုပါ။ ဘာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ Flashable Zip တွေကို Clock WorkMod Recovery ကနေ၀င်ပြီး သွင်းစရာမလိုဘဲ flashable zip ဖိုင်ကို ဖုန်းရဲ့ SD Card ထဲထည့် ဒီဆော့ဝဲထဲဝင် ပြီးရင် ခုနကတုန်းကထည့်ထားတဲ့ zip ဖိုင်လေးကို ဒီဆော့ဝဲထဲကနေရွေးပေးပြီး “Flash Now” နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ Flashable zip ဖိုင်မှန်သမျှကို ဒီဆော့ဝဲအသုံးပြုပြီး flash နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Flash Gordon လို့ခေါ်ပါတယ်။ Flash Gordon ဆော့ဝဲလေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖုန်းက Root လုပ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ လက်ရှိ version မှာတော့ Custom ROM zip ဖိုင်တွေတော့မရသေးပါဘူး ။ နောင် version တွေကျရင်တော့ Custom ROM တွေကိုတောင် Recovery ထဲဝင်စရာမလိုဘဲ ဒီ ဆော့ဝဲလေးသုံးပြီး သွင်းလို့ရမယ့်အနေအထားပါပဲ။ လက်ရှိ မြန်မာစာကို Custom Recovery ကနေ flash လုပ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားကြတဲ့ မြန်မာဖောင့် zip ဖိုင်လေးတွေလည်းရှိနေတာကြောင့် ဒီဆော့ဝဲနဲ့ဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ Flash Gordon v1.2 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Flash Gordon v1.2 for Android (Link 1)
Flash Gordon v1.2 for Android (Link 2)
ငတက်ပြား2ဂိမ်းလေးကို ဆော့ချင်တဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်....
ဒီ ဂိမ်းလေးအတွက် Credit ပေးသင့်တဲ့သူများအားလုံးကိုလည်း Credit ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.....
လိုချင်တဲ့ ဘော်ဘော်တွေလည်း အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါနော်....
NoBloat က system app remover တစ်ခုပါ
NoBloat က system app remover တစ်ခုပါ။ ဖုန်းထဲမှာ မူလကတည်းကပါတဲ့ ဖျက်မရတဲ့ app တွေကို ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းကို Root လုပ်ထားမှ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ တရုတ်ဖုန်းတွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ app တွေ အများကြီးပါရှိပါတယ်။ ဖျက်လို့...လဲမရပါဘူး။
ထို app များကို NoBloat နဲ့ရှင်းနိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပုံပန်းသဏ္ဍန်၊ အချိုးအစားကို လိုအပ်သလို
ပြောင်းလဲနိုင်မယ့် app ဖြစ်ပါတယ်။ ကလိလို့ ကောင်းတဲ့ app လေးပါ။ Role Model လူရုပ်တစ်ရုပ်ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပုံသဏ္ဍန် အနေထား
ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ male or female ပြောင်း...နိုင်တယ်။ အသက်ရွယ် change နိုင်တယ်။ ပိန်တာ ၀တာ ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ တော်တော် လန်းတယ်ဗျ။ ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့
The Booth Pro ကတော့ Hip Hop crazy တွေ အတွက်ပါ
Yo! .. What's up .. Come on .. Come on ..
The Booth Pro ကတော့ Hip Hop crazy တွေ အတွက်ပါ။
ံHip Hop ကို ၀ါသနာပါတယ် ဒါပေမဲ့ Beats တွေ မဖန်တီးတတ်ဘူး
... ဖြစ်နေတဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် နိုင်ငံတကာမှ Hip Hop crazy များ
တီးခတ်ထားတဲ့ Beats တွေကို download ဆွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Booth Pro ဟာ Hip Hop ချစ်သူတွေအတွက် ထည့်ထားသင့်တဲ့
app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တီး(သို့)ကိုယ်တိုင်ရွတ် Rap တွေကို
အချင်းချင်း မျှဝေနေကြတဲ့ Hip Hop Social တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
** ကွန်ပျူတာ Window OS ကြီးကို Android ဖုန်းထဲမှာ ထည့်သုံးမယ် **
ခေါင်းစဉ်ကတော့ လန့်စရာကြီးနော်။ Windown OS တစ်ခုလုံးနည်းပါး
... Android ထဲမှာ ဘယ်လိုသုံးလို့ရမှာလဲ။ ဟုတ်ကဲ့ တကယ်ကို ရပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော် Android ကို အရမ်းချစ်နေရတာပါ။
ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေဆိုတဲ့အတိုင်း အခု ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ Window ကို
Android မှာ သုံးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခု တွေ့ထားပါတယ်။
ဘယ်လိုအသုံးပြုတာလဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာ Window မှာ ပေါ်တဲ့အတိုင်း ..
တစ်ပုံစံတည်း Android မှာ မြင်ရပါတယ်။ မြင်ရရုံတင်ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။
မြင်ရတဲ့ Window OS ကြီးကို ကွန်ပျူတာမှာ သုံးသလိုမျိုး ဖုန်းထဲမှာ
သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘော်ဒါအနေနဲ့ အတော်စိတ်ဝင်စားသွားမှာပါ။
ကျွန်တော်လဲ အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။ ကဲ အပြောလျော့ပြီး
App လေးတစ်ခု ဖုန်းထဲမှာထည့်ရပါမယ်။ နာမည်က PhoneMyPC ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဒေါင်းပြီးရင် install လုပ်ပါ။
အောက်ဘက်နားမှာ စက်သွားပုံ setting ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ ပုံ(၂)မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း ပေါ်လာပါမယ်။
User Name ကြိုက်တာရိုက်ပီး ပေးပါ။ Password တစ်ခုခု ရိုက်ပါ (password ကိုမှတ်ထားပါ)။ ကျန်တာတွေကတော့
လောလောဆယ်တော့ ဘာမှ မလုပ်သေးပဲ ဒီအတိုင်းထားပါ။
အိုကေ back ကိုနှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်လိုက်ရင် NO PCs Found ဆိုတဲ့စာနဲ့အတူ box တစ်ခု မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ မချိတ်ရသေးလို့ပါ။
အာဇာနည်နေ့ကို မိမိ ဖုန်းနဲ့ ဂုဏ်ပြုမယ်
ဒါကတော့ ဥသြ စွဲသံလေးပါ။ဖုန်းမြည်သံအဖြစ်နဲ့ အားလုံး ဂုဏ်ပြုကြရအောင်ဗျာ.
ရေးတဲ့အချိန် 10:24 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ကွန်ပျူတာမှာလို video Format တွေပြာင်းနိုင်တဲ့VidCon(Video Converter ) အသုံးပြုနည်း
ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ Format Factory လိုမျိုး video format တွေကို
ဖုန်းထဲမှာတင် ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Video Converter app တစ်ခုပါ။
ပြောင်းနိုင်တဲ့ for...mat တွေကတော့ 3gp , mp4, avi , vob , mpg ဖြစ်လို့
format စုံလင်ပါတယ်။ apk (၃)ဖိုင် zip ချုံ့ပီး တင်ပေးလိုက်တယ်။ တစ်ခုက
converter apk ပါ။ တစ်ခုက လိုင်စင်ဖြည်ပေးမယ့် key ပါ။ နောက်တစ်ခုက
video codec ဖြစ်ပါတယ်။ သုံခုစလုံးကို install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
apk ကို စဖွင့်တာနဲ့ မိမိဖုန်းအမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီး video codec
မတူညီခဲ့လျင် လိုအပ်တဲ့ video codec ကို Play Store ကနေ download
ဆွဲပေးရပါမယ်။ မြန်ပါတယ် ခဏပါပဲ။ ဖုန်းမှာ Google Play Store
အသုံးပြုနိုင်ဖို့တော့ လိုအပ်တယ်။ အခုတင်ပေးတဲ့ codec နဲ့အဆင်ပြေရင်တော့ download ထပ်ဆွဲပေးစရာမလိုပါဘူး။ အားလုံးအိုကေသွားရင်တော့ video format အစုံကို ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။ အတော်လေး မိုက်တယ်။ flv ကို 3gp ပြောင်းကြည့်တာ အရည်သွေး ကျမသွားပဲ file size အတော်နည်းသွားတယ်။ အသုံးပြုပုံကို အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
app ကိုဖွင့်လိုက်ရင် စတင်တွေ့ရမယ့် menu များမှာ ...
Es File Explorer အသစ် ထွက်ပြန်ပြီ
Es File Explorer အသစ် ထွက်ပြန်ပြီနော် အရင်ဗားရှင်းထက်ကို ပိုစုံလာတာတွေ တွေ့ရတယ် ။
File Explorer တွေထဲကမှ လုလင်ပျို ကတော့ ဒီ Es File Explorer ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။
File Explorer နောက်မှာ ချစ်သူ ပုံလေးထည့်ထားလို့ရတာနဲ့တင် အတော်လေးကြိုက်နေတာ။
ဖုန်းမှာ chat တဲ့ IM+ အလန်းလေuးpdate ထွက်ပါတယ်
IM+ လို့ပြောလိုက်ရင် အွန်လိုင်းမင်းသမီး မင်းသား ကိုကို မမ များ မသိသူ မရှိသလောက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်နော်။
ခုတော့ နောက်ခံ အမဲရောင်လေးနဲ့ အလန်းလေး update ထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုကို ညီညီ တို့အတွက် porn sex sound(သတိ-မိန်းကလေး မယူရ ဟီးးးးး :) )
sexy ringtones ဆိုတာကို တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒါက သီချင်းသံလေးတွေနဲ့ လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ သိပ်ပြီးတော့ မရင့်ဘူးနော်။
ခုကောင်လေး ကတော့ နဲနဲကြမ်းတယ်ဗျ
ပြောရရင် ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲက အသံတွေကို ယူထားသလို ကြမ်းတာ
ဒါကြောင့် မိန်းကလေး မယူရ
Facebook Messenger အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် နောက်ဆုံး update ဇွန်4ရက်နေ့ထွက်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာ pdf စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့ adobe reader ဆော့ဝဲ update ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
update လေးသုံးချင်ရင် ဆွဲပေတော့။
Dialer keypad နောက်ခံကိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့ လန်းမယ်
မမတွေ ညီမတွေကလည်း ကိုးရီးယားမင်းသားနဲ့လန်းချင်ရင်
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM6comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
အသံတိုးတဲ့ ဖုန်းရဲ့ Audio ကို အမှန်ကန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Audio Booster apk
ကဲ ဖုန်းထဲက Audio အသံတွေတိုးလို့စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက်လာပါပြီ ။အသံတွေတိုးလို့ မြင့်လို့ရမယ့်ဆော့ဝဲရှိမလားလို့ ခဏခဏမေးနေလို့ ကျနော်လိုက်ရှာတာ။ အမှန်ကန် မြင့်လို့ရတာဆိုလို့ဒါလေးတစ်ခုပဲတွေ့တာ။
facebook မှာကိုယ့်ကိုဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားလဲ ဖုန်းကနေကြည့်မယ်။
ကဲ facebook တိုတို မမ တို့ရေ
facebook မှာကိုယ့်ကိုဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားလဲဆိုတာကို ဖုန်းကနေကြည့်မယ်နော်။
လုလင်ပျိုက တကယ်အဆင်ပြေမှ တင်ပါတယ်။
facebook မှာကိုယ့်ကိုဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားလဲ ဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက် အင်တာနက်လိုမယ် ဆိုတာတော့ မပြောလည်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ကွန်နက်ချင် အခက်အခဲကြောင့် ပုံမပြတော့ဘူးနော်။
အသုံးလိုရင် အောက်မှာ ဆွဲနော် ။
တစ်ချက်နိုပ်တာနဲ့ Tethering လုပ်ပေးမယ့် Tethering Widget(update ဖြစ်တာတစ်ခါတည်းယူနော်)
ကဲ အင်တာနက်သုံးတဲ့ ပရဟိတ ကိုကိုမမ တို့ရေ
ကိုယ့် အင်တာနက်ကို မောင်နှမ သူငယ်ချင်း တွေကို share ပေးသောသူများအတွက် အဆင်ပြေစေမဲ့တစ်ချက်နိုပ်တာနဲ့ Tethering လုပ်ပေးမယ့် Tethering Widget တဲ့နော်
Tethering ဆော့ဝဲတွေအများကြီး ရှိပေမယ့် အရင်တုန်းကထွက်ခဲ့တာတွေက သိပ်မမိုက်ဘူး
Blogger များအတွက် ဖုန်းကနေဘလော့ပို့စ်တင်လို့ရတဲ့ blogger.apk update ဗားရှင်း ပါ
ကဲ blogger ညီအကိုတို့ရေ
ဖုန်းကနေ ဘလော့တင်လို့ရတဲ့ blogger apk အသစ်ထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။
တကယ်ဆို အွန်လိုင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို တကူးတကတောင် တင်စရာမလိုဘူးနော်။
ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်သုံးသူတိုင်း update ထွက်ရင် play store ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူဆွဲလို့ ရနေတာပဲနော် ။
ဒါပေမယ့် လိုချင်သော သူများနဲ့ ဒေါင်းလော့မလုပ်ရသေးသူများ အဆင်ပြေစေဖို့ တင်လိုက်တယ်နော်။
အခုကောင်လေးက လန်းလာတယ်နော် ။
အရင်ဟာလို ၀င်လိုက်ရင် icon လေးခု ပါတာ မဟုတ်တော့ဘူး
အောက်မှာ ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ပါအုံး။
GSM/WCDMA ဖုန်းတွေရဲ့ MPT GSM/MPT WCDMA ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြင်ကြရအောင်.....
အပေါ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းလေးနော် MPT နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတွေထည့်ပြီးလန်းကြရအောင်/ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Root Access ရှိရပါမယ်။ အရင်ဆုံး လိုအပ်တဲ့ဖိုင်ကိုဒေါင်းပါ။
Carrier Name Changer.apk
ဒါကတော့ Root Exploer.apk ပါရှိပြီးသားသူတွေဒေါင်းစရာမလိုအောင် သတ်သတ်စီခွဲပေးထားပါတယ်။ ကဲစလိုက်ကြရအောင် အရင်ဆုံးဒေါင်းလို့ရလာတဲ့နှစ်ဖိုင်ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Carrier Name ဆိုတဲ့ apk file လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ Root Access တောင်းရင် ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ သူကဘောက်လေးတစ်ကွက်နဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်
အကွက်ထဲမှာ [New Operator Name] ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါ။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က MPT နာမည်ကို ကိုယ်နာမည်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ New Operator Name ကိုဖျက်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုကိုယ့်နာမည်ရေးလိုက်/ပြီးရင် Ok ပေးလိုက် ပြီးရင် ဖုန်းကို Rebot or Restart ချပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုပြန်တက်လာရင် ခုနကပေးထားတဲ့နာမည်လေးက MPT ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုပြီးသွားပြီ ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်လို ......၀ူး......
မြန်မာလိုကျန်သေးတယ် မောလိုက်တာဗျာ . . .ကဲဆက်ပြောမယ်နော်
ရေးတဲ့အချိန် 10:00 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ကိုကို၊ညီညီတို့ အကြိုက် ဆော့ဝဲလေးလေ update ထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်
မှတ်မိမှာပါ အင်းဟာ အင်းဟာ တွေဒေါင်းတဲ့ဆော့ဝဲလေ ဟီးးးးးးးးးးးးးး
လုလင်ပျိုကတော့ သုံးပါဘူး update ရအောင် တစ်ချက်ထည့်ကြည့်တာ
ကဲ အင်းဟာ အင်းဟာ လုပ်လိုက်ကြပါအုံး
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM 8 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Huawei Y300 , G520 , U8950 , U8951 , U8813C , U8813D မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းနည်း
ဒါကတော့ Huawei ( Emotion UI) ဖုန်းတွေမှာ Root မလုပ်ရပဲ မြန်မာဖောင့်တွေ ကီးဘုတ်တွေကို ထည့်သွင်းပေးလို့ရတဲ့ နည်းပညာလေးတစ်ခုပါ။
Emotion UI ပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ Huawei Y300 , G520 , U8950 , U8951 , U8813C , U8813D တွေပါ။ Emotion UI ဟုတ်မဟုတ်ကို ဖုန်းရဲ့ Setting>About Phone> Emotion UI Version မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
* Huawei Y300 , G520 , U8950 , U8951 , U8813C , U8813D ဖုန်းတွေကို မြန်မာဖောင့်မထည့်ခင် ပထမဆုံး အောက်က လင့်ဆီကနေ အသုံးပြုရမယ့် Rar File ကို Download ဆွဲယူထားပါ *
>> ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းယူပါ
ပြီးပြီဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လုပ်ပါ။
Emotion Ui သုံး huawei တွေအတွက် font ပါပြီး theme တွေပါ
ပါဝင်တဲ့ Theme တွေကတော့
Affection Of Ya An
S4 Themes By MMSD
s4 theme ကိုတော့ ကိုဖြိုးချမ်း MMSD မှ ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM7comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Viber ကနေ ကိုယ် ကိုမလိုချင်တဲ့ messages တွေ ph call တွေမလာအောင်လုပ်နည်း
အခု ကျနော် ပြောပြမှာကတော့ ယောက်ျားလေးများအတွက်အဓိကပေါ့ဗျာ:)
Huawei C8813 and C8813D တွေမှာ Viber သုံးရင် အ၀င်အထွက်အသံတွေမကြားဘူးဆိုသူများအတွက်
Huawei C8813 and C8813D တွေမှာ
Viber သုံးရင် အ၀င်အထွက်အသံတွေမကြားဘူးဆိုသူများအတွက်
နှစ်ဖက်စလုံးအသံကြားရတဲ့ viber ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
Android APK File တွေကို IDM ဖြင့်ဒေါင်းမရဘူးဆိုလျှင် ဖြေရှင်းနည်း
မနေ့က ကျနော် သူငယ်ချင်းတယောက် သူရဲ့ CHROME မှာ
Apk တွေကိုဒေါင်းရင် IDM နဲ့ ဒေါင်းမရလို့ လာမေးတယ် ကျနော်လည်းလိုက်ရှာတော့ ဒါလေးတွေ့တာနဲ့
လုပ်ပေးလိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ် လုပ်နည်း ကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြထားပေးလိုက်ပါတယ်
အရင်ဦးဆုံး IDM ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ။ Option ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါ
OPTION ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်ပုံအတိုင်းကျလာမယ်
icon ပြောင်း စာပြောင်းတဲ့ icon charger အသစ်ထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတီ
icon ပြောင်း စာပြောင်းတဲ့ icon charger အသစ်ထွက်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
android မှာ Force close error ဖြစ်နေရင် ဖြေရှင်းနည်း
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းသုံးနေရင်း Force close error massage တက်တက်လာပြီး ကိုယ်ဖွင့်ထားတာလေး ပိတ်သွားတာ မျိုး ကြုံကြရမယ်ထင်ပါတယ် ဒီလို ပြသနာမျိုးခဏခဏ ကြုံလာခဲ့ရင် တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းလာပါတယ် ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလေးပြောပေးပါမယ်
ရေးတဲ့အချိန် 8:00 AM 11 comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Android Phone အတွက် အဆင်ပြေ ဖလမ်းဖလမ်းထလို့ ရတဲ့ဆေ...
Flash Gordon v1.2 for Android (Flash Zips WITHOUT ...
** ကွန်ပျူတာ Window OS ကြီးကို Android ဖုန်းထဲမှာ ...
ကွန်ပျူတာမှာလို video Format တွေပြာင်းနိုင်တဲ့VidC...
ကိုကို ညီညီ တို့အတွက် porn sex sound(သတိ-မိန်းကလေး...
ဖုန်းထဲမှာ pdf စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့ adobe reader ဆော့ဝဲ...
facebook မှာကိုယ့်ကိုဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားလဲ ဖုန်...
တစ်ချက်နိုပ်တာနဲ့ Tethering လုပ်ပေးမယ့် Tethering ...
Blogger များအတွက် ဖုန်းကနေဘလော့ပို့စ်တင်လို့ရတဲ့ b...
GSM/WCDMA ဖုန်းတွေရဲ့ MPT GSM/MPT WCDMA ဆိုတဲ့စကား...
ကိုကို၊ညီညီတို့ အကြိုက် ဆော့ဝဲလေးလေ update ထွက်လို...
Huawei Y300 , G520 , U8950 , U8951 , U8813C , U881...
Emotion Ui သုံး huawei တွေအတွက် font ပါပြီး theme ...
Android APK File တွေကို IDM ဖြင့်ဒေါင်းမရဘူးဆိုလျှ...
icon ပြောင်း စာပြောင်းတဲ့ icon charger အသစ်ထွက်လို...
android မှာ Force close error ဖြစ်နေရင် ဖြေရှင်းနည...